Warmurtiyeed laga soo saaray shirka Golaha Wadatashiga Qaran. (Qodabada laga soo saaray oo dhamaystiran.) | Somaliweyn
Warmurtiyeed laga soo saaray shirka Golaha Wadatashiga Qaran. (Qodabada laga soo saaray oo dhamaystiran.)
MUQDISHO – Waxaa magaalada Muqdisho ku soo geba-geboobay shirka golaha wadatashiga qaran, kaas oo uu shirguddoomiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sh. Maxamuud iyada oo ay ka qaybgaleen ra’iisal wasaauraha Maxamed Xuseen Rooble, iyo madaxda dawlad-goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur-Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Gobolka Banaadir.
.2 Goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la dhamaystiro hannaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la-dagaalanka argagaxisada.